Ungasirekhoda njani isikrini kuwe Windows 10 PC | Iindaba zeGajethi
Mhlawumbi kunjalo rekhoda iscreen sekhompyuter yethu Ayisiyo enye yezona zinto zixhaphakileyo esizenzayo mihla le, kodwa kuyinyani ukuba ngezihlandlo ezithile kusenokufuneka sikwenze oku. Ukongeza, kukho iqela elincinci labantu abanjengoososayensi beekhompyuter, abo banoxanduva lokudala iitutorials okanye ii-gamers, ekufuneka babhenele kolu khetho ngalo lonke ixesha.
Ukuba ufike ngoku uzimisele ukufumana iifomula zokurekhoda iscreen sakho Windows 10 I-PC, ungaphumla, kwaye kukuba awusayi kuphinda ukhangele ezinye. Kule nqaku siza kukuchaza ngendlela elula necacileyo Indlela yokurekhoda isikrini Windows 10, into enokwenziwa ngokubulela kwisicelo esitsha semveli «Umdlalo weBar». Kwakhona, ukuba awusebenzisi ii-WIndows 10, ungakhathazeki, kuba siza kuchaza nendlela yokurekhoda ikhompyuter yakho, ewe, usebenzisa izixhobo zomntu wesithathu.
1 Indlela yokurekhoda isikrini ngaphakathi Windows 10?
2 Windows 10 izixhobo zokurekhoda isikrini
2.1 Umenzi osebenzayo
2.2 Umhleli weVidiyo yeWondershare
Indlela yokurekhoda isikrini ngaphakathi Windows 10?
Ngokufika Windows 10, inguqulelo yamva nje yenkqubo yokusebenza kweMicrosoft edumileyo, izinto ezininzi zitshintshile ngokuthelekiswa nezinye iiWindows. Enye yazo kukurekhoda ikhusi lekhompyuter yethu ngokuthe ngqo, kwaye ngaphandle kokubhenela kwinkqubo yomntu wesithathu, ethi kwiimeko ezininzi ibangele iingxaki kuthi phantse rhoqo.
Ibonakaliswe ikakhulu kubadlala umdlalo, abarekhoda imidlalo yabo kwaye kamva bayithumele kuYooTube, abo baseRedmond baphuhlisiwe okubizwa ngokuba yiMidlalo yeBhari esivumela ukuba sibhale isikrini sekhompyuter yethu nge Windows 10. Kubalulekile ukukhankanya le yokugqibela njengoko le bar isebenza kuphela nohlobo lwamva nje lwenkqubo yokusebenza yeMicrosoft.
Ukufikelela kwibar yomdlalo, cofa nje indibaniselwano yesitshixo "Windows" + "G". Emva koko baya kusibuza ukuba ngaba sifuna ukuvula ibar yomdlalo kwaye ukuba siphendula ngokuqinisekileyo, singaqala ukuyisebenzisa.
Ukubonakala kwebar, enokufihlwa nanini na, yile;
Kukho ezinye iindlela ezimfutshane onokuzisebenzisa ukuba awufuni ukusebenzisa le bar. Kunye 'Windows' + 'Alt +' R 'ungaqala ukurekhoda ividiyo, eya kugcinwa kwifolda yakho yokubamba kwifomathi ye-MP4. Ukuba ufuna ukuguqula useto, ungaya kulo Windows 10 usetyenziso kwiXbox yakho kwaye ukhethe umgangatho wevidiyo, iindlela ezimfutshane, phakathi kwabanye.
Ayisiatsho ukuba ukhetho kunye nokusebenza kwale bar kulungelelaniswa ngokupheleleyo kwi-cogwheel. Nje ukuba ungene ngaphakathi kwimenyu esezantsi, kuya kuvela ezi zinto zilandelayo onokuzilungiselela nangaliphi na ixesha ngendlela othanda ngayo.
Ngaphandle kwamathandabuzo, Windows 10 "Umdlalo webhari" esivumela ukuba senze ukurekhodwa kwescreen kuphawuleka ngokulula kwayo, nangona sifuna ukwenza ividiyo ekumgangatho ophezulu ngokuhlela okubalulekileyo, kufuneka sisebenzise ezinye iintlobo zezixhobo.
Windows 10 izixhobo zokurekhoda isikrini
Ukurekhoda Windows 10 isikrini njengoko sele sibonile ayisiyonto inzima kwaye nabani na anokuyenza ngendlela elula nangaliphi na ixesha, ngokucinezela nje ukudityaniswa kwezitshixo. Kungenzeka ukuba awukabinayo inguqulelo yamva nje yenkqubo yokusebenza evela kwinkampani esekwe eRedmond, ke kuya kufuneka ubhenele kwezinye iinkqubo ukuze ukwazi ukurekhoda ikhompyuter yakho. Ngaphandle kwamathandabuzo, eyona nto ilula iya kuba kukutsiba ungene Windows 10, kodwa mhlawumbi awukwazi okanye awufuni, ke siza kukubonisa ezinye iinkqubo. Ukuba sele unayo iWindows entsha, mhlawumbi ezinye zazo zinokukunika umdla kuba bengagcini nje ngokurekhoda ikhompyuter yakho, kodwa kwindlu nganye bakukhonza ukuba uhlele iividiyo kwaye uzishiye njengengcali yokwenyani.
Apha sikubonisa ezinye zeenkqubo onokuzisebenzisa ukurekhoda isikrini Windows 10 okanye kwezinye iinkqubo ezisebenzayo ngesitywina seMicrosoft;
Umenzi osebenzayo sesinye sezixhobo, ezifumanekayo zokukhuphela, esinceda ukurekhoda iscreen, kodwa kwangaxeshanye sisivumela ukuba sibalise iividiyo, sibeke ilizwi-ngaphezulu, hlela, kongeza imizobo, izichasiselo kunye nezinye izinto ezininzi eziza kushiya ividiyo yethu isondele kakhulu kwimfezeko.
The Windows 10 ibha yomdlalo ingaphezulu kunomdla kwaye unokufumana okuninzi kuyo, kodwa ukuba ufuna ukulinganisa ufuna ezinye iintlobo zezixhobo, hayi kuphela ukurekhoda isikrini kodwa nokwenza nokuhlela iividiyo ezibonakala ngathi zenziwe yingcali.
Umhleli weVidiyo yeWondershare
Siyabulela esi sixhobo siya kuba nakho ukurekhoda isikrini hayi kwiWindows 10 kuphela, kodwa nakwiWindows 7 okanye kwiWindows 8.Ukuthandwa kwayo ikakhulu kubangelwa kukukhululeka kokusetyenziswa kunye nemisebenzi eyahlukeneyo enayo nesivumelayo ukuhlela iividiyo zethu njengengcali yokwenyani.
Screen ukurekhodwa kunye Wondershare Filmora Video Editor kulula ngokwenene njengoko kunokwanela ukuvula le nkqubo kwaye ukhethe ngokugqibeleleyo indlela yokuqalisa iprojekthi. Emva koko kuya kwanela ukukhetha ukhetho "Rekhoda isikrini sePC" esingezantsi nje kukhetho lwe "Rekhoda".
Kuthungelwano lothungelwano zininzi iinkqubo zasimahla ezivumela ukuba senze ukurekhodwa kwescreen kwikhompyuter yethu, kodwa phantse Ngokhuseleko olupheleleyo sinokukuxelela ukuba nokuba ujongeka kangakanani awuyi kufumana naziphi na izinto zeJing. Iimpawu zayo zibandakanya ukulula kwayo, ukubanakho ukuthatha imifanekiso kunye nokwenza ividiyo kunye nabo okanye ukubanakho kokusebenzisa iindlela ezimfutshane zekhibhodi yeWindows ukuqhuba le nkqubo ngaphandle kokusebenzisa imouse.
Ngaba ukwazile ukurekhoda isikrini sakho sekhompyuter kwiividiyo zakho ngaphandle kwengxaki ezininzi?. Khawusixelele ngamava akho kwisithuba esigciniweyo sokuphawula kule posi okanye ngenye yeendlela zonxibelelwano esikhoyo. Sixelele kwakhona ukuba usebenzisa owomthonyama Windows 10 isicelo sale okanye ukuba ukhetha ezinye iintlobo zezicelo zomntu wesithathu ezinjengezo sikubonise zona kweli nqaku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Indlela yokurekhoda isikrini kwi Windows 10 PC
Ndiza kuzama enye into Windows 10 kuba ndizamile ukwenza isifundo seFotohop kwaye irekhode yonke into ngaphandle kweemenyu zomxholo, andazi ukuba kutheni.
I-NASA ibeka usuku kwimishini eya kuthi ifike kuyo iAlpha Centauri, 2069